ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ် ~ mgkhainghtoo
ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ်
21:19 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ် ။
မည်သည့် Android ဗားရှင်းမဆို စာကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် :)
မိမိဖုန်းထဲမှာ ကျနော့်ဖောင့်လေးကို ထည့်ပေးထားယုံနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Movie များကို စာတန်းထိုး srt ဖိုင်လေးထည့်ပြီး ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
လိုအပ်သည့်…. ဆော့ဝဲများ / စာတန်းထိုးဖိုင်များ / ရှပ်ရှင်ကားများ / ကို အောက်တွင်လေ့လာပြီး ဒေါင်းယူပါ
အရင်ဆုံး ”MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဆိုတဲ့ မြန်မာ TTF Font လေးကို ဖုန်းရဲ့တစ်နေရာမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် ကိုယ်ကြည့်မည့်ကားနှင့် ထိုကား၏စာတန်းထိုးဖိုင်ဖြစ်တဲ့ srt ဖိုင်လေးကို ဖိုဒါတစ်ခုထဲမှာ နာမည်တူပေးထားပြီး ထည့်ထားလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် MX Player Pro ကိုဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်ယုံပါပဲ
အဲ့မှာ မြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲ တခြားဖောင့်တွေပေါ်နေပါမယ် အောက်ကရေးထားတဲ့အတိုင်း ကျနော့်ဖောင့်သွားအပ်ပေးလိုက်ပါ ။
ဗွီဒီယိုကို ဖွင့်ပြီးသည့်အခါမှာ MX Player Pro ထဲက Subtitle ရဲ့ Settings ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ။
Font ဆိုတဲ့ အတန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
Select font folder ဆိုတာကို နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ ။
( စာမတွေ့ပါက အောက်နားနည်းနည်းပွတ်ဆွဲချလိုက်ပါ )
အဲ့မှာ ရွေးချယ်ဖို့ရန် My File ထွက်လာပါမယ် ။ ဖောင့်ထည့်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီး ကျနော့်ဖောင့် “MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ။
ကဲ…. မြန်မာစာ မှန်ကန်စွာပေါ်လာတာကို သင်တွေ့ရမှာဖြစ်သလို… မည်သည့် Android ဗားရှင်းမဆို စာကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
+++ ဖောင့်အပ်နည်းကို Video နဲ့ကြည့်ချင်သူများ ဒီမှာကြည့်ပါ +++
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ကို လိုချင်သူများဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဒေါင်းလော့လင့်အစုံနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို pCloud လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို FilePup လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို Fileswap လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို dataFile Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို Mega လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
“MM Subtitle Font-DjjoeMan(MMF)” ဖောင့်ကို Tiny လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
MX Player Pro ကို လိုချင်သူများဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဒေါင်းလော့လင့်အစုံနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်
MX Player Pro V1.7.23 ကို Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို Tiny လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို FilePup လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို dataFile Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို Mega လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။
MX Player Pro V1.7.23 ကို FileSwap လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ဆိုဒ်က7MB ရှိပါတယ် ။